Iingeniso zengqesho: i-Federal / State Lifeline
Konke Ngeenzuzo Zengqesho
by URobert Longley
Iingeniso zokungabikho kwemisebenzi kumazinga kaRhulumente kunye namazwe
Imbuyekezo yengqesho ayikho inzuzo karhulumente ofuna ukuyivuma. Kodwa iUnited States yangena ngokusesikweni koqoqosho olubi kunabo bonke ukususela ngoDisemba kuDisemba 2007, kunye nezigidi ezi-5.1 eziMelika zalahlekelwa yimisebenzi ngoMashi 2009. Abasebenzi abangaphezu kwezigidi ezili-13 babengasebenzi.
Isingeniso sokungabikho kwemisebenzi kazwelonke sasimi-8,5 ekhulwini kwaye sakhula. Ekupheleni kukaMatshi 2009, umyinge wama-656,750 aseMerika ngeveki aphendulela izicelo zabo zokuqala zokuhlawula umsebenzi.
Izinto ziye zathuthuka kakhulu ukususela ngoko. Inqanaba lokungabikho kwemisebenzi lase-United States liye lafika kuma-4.4 ekhulwini ngo-Apreli 2017. Le nto ibonakalise izinga eliphantsi kakhulu eliye lavela kuma-Meyi 2007. Kodwa oku kushiya abasebenzi abangama-7.1 emisebenzi, kwaye bafuna uncedo.
Uphi na imali yokuhlawula inzuzo yokungasebenzi? Nantsi indlela esebenza ngayo.
Ukukhuselwa koxanduva lwezoqoqosho
Inkqubo yesibonelelo sokunqongophala komsebenzi (federal / state unemployment compensation) (UC) yenziwe njengenxalenye yoMthetho woKhuseleko loLuntu ka-1935 ekuphenduleni ukuPhukisa koMkhulu . Izigidi zabantu abaye balahlekelwa yimisebenzi babengenakukwazi ukuthenga izinto kunye neenkonzo, eziye zaholela ekulahlekisweni okungakumbi. Namhlanje, ukuhlawuleka kwemisebenzi kubonisa okokuqala kwaye mhlawumbi umgca wokugqibela wokhuselo malunga nomonakalo wokungasebenzi. Le nkqubo yenzelwe ukubonelela abasebenzi abafanelekileyo, abangasebenziyo abanemali yenyanga nganye eyaneleyo ukuba bavumele ukufumana iimfuno zobomi, ezifana nokutya, indawo yokuhlala kunye nezambatho, ngelixa bekhangela imisebenzi emitsha.
Iindleko zinyanisiweyo zikwabiwe nguRhulumente Wephondo kunye noRhulumente
I-UC isekelwe kumthetho wesigqeba, kodwa ilawulwa yilizwe. Iprogram ye-UC ihlukile kwiinkqubo ze-inshurensi zentlalo yase-US kuba ixhaswa ngemali ngokubanzi malunga neerhafu okanye zombuso irhafu ehlawulwa ngabaqeshi.
Okwangoku, abaqeshi bahlawula irhafu engaphantsi kwemisebenzi engama-6 ekhulwini kwi-$ 7,000 yokuqala eyayizuzwa ngabasebenzi babo ngamnye ngexesha lonyaka wekhalenda.
Ezi ntlawulo zentlanganisela zisetyenziselwa ukumboza iindleko zokulawula iinkqubo ze-UC kuwo onke amazwe. Iintlawulo ze-UC zentlawulo zongezelela ukuhlawula isigxina seendleko zokunqongophala kweempesheni zengqesho ngexesha lokungaphangeli kwemisebenzi kunye nokubonelela ngengxowa evela kuyo, ukuba kuyimfuneko, ukuhlawula inzuzo.
Iirhafu zeRhafu ze-UC zikarhulumente ziyahluka ukusuka kummandla ukuya kwilizwe. Zingasetyenziselwa kuphela ukuhlawula izibonelelo kwabasebenzi abangasebenzi. Ireyithi yentlawulo yaseburhulumenteni ye-UC ehlawulwa ngabaqeshi isekelwe kwisantya sokungasebenzi emsebenzini. Njengoko izinga labo lokungasebenzi likhuphuka, amazwe ayadingeka ngumthetho wesigqeba ukuphakamisa izinga lokuhlawula i-UC ehlawulwa ngabaqeshi.
Phantse abasebenzi bonke abahlawulelwayo kunye nabasebenzi abahlawulelweyo ngoku bafunyenwe kwinkqubo ye-UC / federal state. Abasebenzi bezithuthi bahlanganiswa yiprogram yomgaqo-nkqubo ohlukeneyo. Amalungu enkonzo yangaphandle-mali kunye nenkonzo yakutshanje kwiiMpi zoPhuhliso kunye nabasebenzi baseburhulumenteni abambisene nomthetho baqulunqwe yiprogram yomgaqo-nkqubo, kunye namazwe ahlawula izibonelelo ezivela kwiimali zombuso njengabameli be-government federal.
Kuze kube nini iiNzuzo ze-UC zokugqibela?
Uninzi luhlawula iintlawulo ze-UC kwabasebenzi abangafanelekanga ukuya kwiiveki ezingama-26. "Izinzuzo ezongeziweyo" zinokuhlawulwa ixesha elide nje ngeeveki ezingama-73 kwixesha eliphakamileyo kakhulu kunye nokunyuka kwengqesho kulo lonke okanye kwilizwe ngalinye, kuxhomekeke kumthetho kaRhulumente.
Iindleko "zeenzuzo ezongezelelweyo" zihlawulwa ngokulinganayo kwimali kaRhulumente kunye neyezemfundo.
Umthetho we-American Recovery and Reinvestment Act, ngo-2009 we-bill stimulus bill, wanikezelwa iiveki ezingama-33 zee-UC ezongezelelweyo iintlawulo kubasebenzi abaxhamliweyo ukuba baphele ekupheleni kukaMatshi ngaloo nyaka. Umthethosivivinywa uphinde wandisa iinzuzo ze-UC ezihlawulwe kwabasebenzi abayizigidi ezingama-20 abangenamsebenzi ngama-25 eveki nganye.
Ngaphantsi koMthetho wokuLungiswa kweNkxaso yoNyaka ka-2009 ongasayinwa nguMongameli Obama ngomhla kaNovemba 6, 2009, iintlawulo zengeniso yokungahlawulwa kwemisebenzi zandisiwe kwiiveki ezili-14 kuzo zonke iindibano. Abasebenzi abangenamsebenzi babesithuba seeveki ezintandathu zeenzuzo kwiindawo apho izinga lokungabikho kwemisebenzi lalingekho okanye ngaphezulu kwama-8.5 ekhulwini.
Ukususela ngo-2017, inzuzo ye-inshorensi engapheliyo yengqesho ivela kwi-$ 235 ngeveki eMississippi ukuya kuma-742 ngeveki eMassachusetts kunye ne-$ 25 ngomntu oxhomekeke kwi-2017.
Abasebenzi abangaqeshwanga kumazwe amaninzi bafunyanwe kwiiveki ezingama-26, kodwa umyinge iiveki ezili-12 kuphela eFlorida kunye neeveki ezili-16 eKansas.
Ngubani oqhuba inkqubo ye-UC?
Inkqubo ye-UC jikelele ilawulwa kwinqanaba lezemfundo liSebe lezeMisebenzi yoQeqesho noQeqesho eMelika. Urhulumente ngamnye ugcina i-inshorensi ye-inshorensi yengqesho.
Ufumana Njani Izinzuzo Zengqesho?
Ukulungelelaniswa kwezibonelelo ze-UC kwakunye neendlela zokufaka izicelo zokufumana izibonelelo zibekwa yimithetho yelizwe elihlukeneyo, kodwa kuphela abasebenzi abazimisele ukulahlekelwa imisebenzi yabo ngaphandle kwephutha labo bafanelekile ukufumana inzuzo kunoma yiphina imeko. Ngamanye amagama, ukuba ususiwe okanye uvumele ngokuzithandela, mhlawumbi awuyi kufaneleka.
Ziziphi iiBill Bills kuRhulumente?
Emva kweeNgqungquthela zeNgqungquthela xa kudala
Ingaba Iinkonzo Zokujonga Iingxowa-mboleko zingavimba Ubuntshontsho?
Ukuhlaziywa kweNtlalontle eMelika
Ngomthetho weNkululeko yoLwazi
Kutheni Abantu Badinga Urhulumente?
Ngomgaqo we-United States
Yiyiphi iSivumelwano esiPhezulu ngokuShishini kunye neNtengiso (GATT)?
I-Art of Atomic Diplomacy
I-University of Illinois yase-Edwardsville
Isikhokelo soMvakalisi kwiMiboniso yaseLos Angeles
Ezinye izalathisi e 'Romeo noJuliet'
AmaGalaxi asebenzisanayo aneziphumo ezinomdla
I-Ballet Most Famous Classical Ballets Yonke Ixesha
Ukusetyenziswa kweeNkcazo zokuThutyana kwiSatifikethi seNtlobo
Imihla yeveki kwisiTaliyane isigama
Uluhlu lokuHlola lokuHlaba ngaphandle
Indlela yokutshintsha uluhlu lwekholomu okanye udidi kwi-MySQL
Iilwimi zesiTaliyane zixubile: Vedersi
Izizathu Zokuba Ngutitshala
I-Top 20 Imifanekiso yeNtetho
Iimali ezibi kunazo zonke
Ngaba i-Wasp Spray isebenza ngokuzikhusela?
Ziziphi Iikhono Ngaba Ndifuna Ukufunda Ifilosofi?
Iimpawu ezi-7 zezobugcisa kunye nokuba kutheni ukwazi ukuba kubalulekile
Usuku lwe-Independence yaseChile: ngoSeptemba 18, 1810
8 Izifundo ze-Guitar ezilula ze-Intanethi zabaqalayo
I-Glossary Art: Masking Fluid okanye Frisket
IiDVD eziLungileyo zeDrive zeDrive kwiiNkwenkwekazi